मेरो ५ मिनेटको ३ लाख हो ,तिर्न सक्ने कोई सङ हिम्मत छ, भने आऊ : सुष्मा कार्की -
मेरो ५ मिनेटको ३ लाख हो ,तिर्न सक्ने कोई सङ हिम्मत छ, भने आऊ : सुष्मा कार्की
नेपाली चलचित्रकी हट नायिकाको सुचीमा रहेकी नायिका सुष्मा कार्कीले एक पत्रकार सङ गरेको हट कुराकानि -पुनपोस्ट , प्राय मानिसहरु यौन क्रियाकलाप गर्न धेरै रुचाउछन यधपी उनीहरु बाहिरि रुपले त्यसलाई अस्विकार गरेता पनि, समाज यौनका सम्बन्धमा कुण्ठित छ। कतिपय मनोविश्लेषक भन्छन्, । ‘नेपालीहरू बाहिरी दुनियाँसँग यौनका विषयमा छिःछिः र दुर-दुर गर्छन्, भित्र भने यौनबाहेक केही सोच्दैनन्।’ यो कुरा नायिका सुष्मा कार्कीलाई पनि लाग्न थालेको छ।
केही समययता नेपाली चलचित्रकी हट नायिकाको सूचीमा दरिएकी सुष्माका जति पनि समाचार बने, संयोगवश ती सबै यौनकै वरिपरि थिए। उनी पनि के कम, आफ्ना शुभचिन्तकहरू जे चाहन्छन् उनी त्यो पूरा गर्न पछि पर्दिनन्। मेरो एउटा साथी छ र केही म्युजिक भिडियोबाट रजतपटमा देखिएकी हट सुष्माले बाहिरी दुनियाँका विषयमा त बोलिन् नै, आफ्ना केही आन्तरिक रहस्य पनि खोलिदिइन्। पढ्नुस रोचक इन्टरभ्यू सुस्मा कार्की सँग: सुष्मा कार्की राम्री कि हट ?
आफ्ना बारेमा के कमेन्ट गरौं, त्यो त अरूले गर्ने हो। तैपनि ? दर्शकका लागि हट, मलाई चिन्नेहरूका लागि चुलबुली प्यारी सुष्मा। यसरी दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्न पाइन्छ त ? -कला मेरो प्यासन हो। मलाई दर्शकहरूले जुन रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो मैले दिनैपर्छ। बेडसिन पनि ? -हो।
किन यति सार्‍हो खुलेको ? -बाहिर जति सार्‍हो हल्ला छ, त्यति सार्‍हो चाहिँ होइनन्। यस्ता हल्ला कहिले पत्रकारहरूले चलाइदिन्छन्, कहिले म आफैं चलाउँछु। कसरी ? -पत्रिकालाई केही न केही त मसला चाहियो, पत्रकारले ‘लहै सुष्मा, तिम्रा बारेमा म यस्तो लेख्दैछु’ भन्नुहुन्छ। मेरो नाइँ भन्ने बानी छैन।
त्यसैले छापिन्छ। कहिलेकाहीँ आफ्ना बारेमा पत्रिकामा नयाँ कुरा आओस् भनेरै आफैं गसिपका विषय दिन्छु। कहिले अधर चुम्बन, कहिले बेडसिन कहिले निर्देशकसँगको खटपटजस्ता विवाद आउनुको कारण यही हो ? -हुँदै नभएको कुरा त आउने होइनन्।
कहिलेकाहीँ थोरै बढाइचढाइ हुन्छ, त्यति हो। फरक पहिचान बनाउन यसो गरेको हो ? -समयको माग भएर। कहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा भयो भन्ने लाग्दैन ? -जब मान्छेहरूले मलाई नेगेटिभ रूपमा हेर्छन्, त्यो बेला लाग्छ। कस्तो नेगेटिभ ?
आज पानिमा लगानि गरे भविष्यमा अाैषधि उपचारमा लगानि गर्न पर्दैन – आज पानिमा लगानि गरे भविष्यमा अाैषधि उपचारमा लगानि गर्न पर्दैन – सबै हिरोइन पैसा लिएर सेक्स गर्छन्, सबैको कसै न कसैसँग सेक्स भिडियो बनेको छ भनेर सोच्ने दर्शकहरू धेरै रहेछन्। यस्ता कुरा मनमा राख्ने मान्छेको कमेन्ट सुन्दाचाहिँ शुद्ध कलाकार भएर बाँच्न गाह्रो छ भन्ने लाग्छ।
त्यस्तो सोच राख्ने दर्शकहरूको संख्या कति पाउनुभयो ? -प्रत्येक महिना दुई-चार जना। कसैले फोनमा कसैले भेटमा र कसैले बाहिरफेर यस्ता कुरा गर्छन्। त्यसैले पनि मैले आफ्नो पुरानो मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरें। पहिले म सबैको कलाकार हुँ, किन प्रशंसकहरूलाई अबोइड गरौं भन्ने लाग्थ्यो। अहिले आफ्नो घेरा सीमित बनाएकी छु।”
-एकपटक मध्यरातमा फोन आयो। म मस्त निद्रामा थिएँ। पहिलो पटक सायद उठाउन सकिन। फोन उठाएपछि उसले राम्रो कुरा गर्‍यो। कुरा गर्दै जाँदा ‘म तिमीलाई एक रातको १ लाख रुपैयाँ दिन्छु, प्लिज’ भन्न थाल्यो। – अनि त मेरो होस हवास उड्यो। त्यसअघि फेसबुकमा दुई लाखको अफर आएको थियो। त्यस्ता नकारात्मक फोन वा सार्वजनिक टिप्पणीका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?
-१-२ लाख सानो रकम होइन। आखिर सुष्मामा केही त छ, ,,जसले मान्छेलाई आकषिर्त गरिरहेको छ।
उहाँहरू सबै मेरा फ्यान नै हो भन्ने लाग्छ। यत्ति हो, उहाँले मेरो आकर्षणलाई प्रेममा होइन, सेक्सका रूपमा लिनुभयो। पर्दा वा पत्रिकाका पानामा देखिने बोल्ड क्यारेक्टर यथार्थमा त्यस्ता हुँदैनन् भन्ने कुरा उहाँहरूले नबुझ्नु भएको हो।
वक्षस्थलमा टाटु खोपाउनुभएको छ, अनि त्यसलाई राम्रैसँग प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, त्यसैले पो हो कि ? -त्यो टाटुमा गुलाफको फूल पनि छ। त्यो पनि त हेर्नुपर्‍यो नि।,,
के हो त्यसको अर्थ ? -म हट छु, तर गुलाफको फूलजस्तै कोमल । सूर्यको तातोसँग गुलाफको फूल त्यसै पनि ओइलिनु पर्ने, होइन र ? – अलि विरोधाभास लाग्न सक्छ। टाटु बनाउने बेलामा मैले म बाहिर सूर्यजस्तै र भित्र गुलाफजस्तै छु भन्न खोजेकी थिएँ। बुझाइ मान्छेपिच्छे फरक हुँदो रहेछ। तपाईंले आफ्नो वक्षस्थललाई नै किन यति महत्व दिनुभएको ?
-वक्षस्थल मेरो सेक्स सिम्बोल मात्र हो। मलाई त आफ्ना ओठ र आँखा मन पर्छन्। कलाकारितामा कहाँसम्म पुग्ने योजना बनाउनुभएको छ ? -बलिउडसम्म। केही प्रयास गर्नुभयो कि सपना मात्रै हो ? – प्रयास गरिरहेकी छु। हिन्दी सिनेमाकी पाश्र्व गायिका सपना अवस्थीसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढिरहेकी छु। आफ्नो पोर्टफोलियो बनाइरहेकी छु। हेरौं, कतिसम्म सफल भइन्छ। आइटम डान्सर नै बन्ने ? -कलाकारको वर्ग हुँदैन। त्यो त भाग्य र निर्देशकले दिने भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो। लभ ब्रेक भएपछि काममा निकै सक्रिय हुनुभयो, प्रेमले कलाकारितालाई असर गर्दो रहेछ, हो ?
– म ब्रेक भैसकेको प्रेमको कुरा गर्न चाहन्न। मैले यो विषयमा धेरै कुरा गरिसकें।
मैले प्रेमपछिको अवस्था जान्न चाहेको हो। अँ फरक पर्दो रहेछ। अरूलाई टाइम दिनु नपर्ने, अरूको हस्तक्षेप सहनु नपर्ने जस्तो लाग्यो। मानिस जुन लाइफ बाँच्छ त्यसैमा रमाउनु पर्‍यो नि, होइन ? तैपनि थाकेको बेला माया गर्ने मान्छेको आवश्यकता त परिहाल्छ नि, पर्दैन र ? समाजले के भन्छ भन्दा पनि घर परिवारले के भन्छन् भन्ने कुरा मलाई महत्वपूर्ण लाग्छ।
प्रकाशित मिति १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०५:१७